Degdeg: Raysal wasaaraha itoobiya Abey ahmed oo isku shaadheyn ku sameeyey wasiiradiisa – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Degdeg: Raysal wasaaraha itoobiya Abey ahmed oo isku shaadheyn ku sameeyey wasiiradiisa
Degdeg: Raysal wasaaraha itoobiya Abey ahmed oo isku shaadheyn ku sameeyey wasiiradiisa
Raiisel wasaare Abiy Ahmed ayaa shaaciyey isku shaandhayn weyn oo u aragta magacaabida toban shaqsiyaad xilal kala duwan maanta. Isku shaandhaynta ayaa laga qaaday xil ka qaadistii Wasiirka Difaaca Lemma Megerssa iyo ku xigeenka duqa magaalada Addis Abeba Takele Uma xilalkooda.
Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska raysal wasaare Abiy, wasiirka difaaca Lemma Megerssa waa laga qaaday waxaana lagu badalay Kene Yadeta oo haysta (PhD), oo ahaa madaxii hore ee nabada iyo amniga ee gobolka oromada. Lemma ayaa loo magacaabay jagadaas Abriil 2019.
Duqa magaalada Addis Abeba Takele Uma ayaa laga xayuubiyay maamulka magaalada waxaana loo magacaabay inuu noqdo wasiirka wasaarada macdanta iyo batroolka. Takele waxaa magacaabay Golaha Maamulka Magaalada Addis Abeba si uu u noqdo ku xigeenka duqa bisha July 2018.
Takele Uma ayaa badalaya Dr. Samuel Urkato, kaas oo isna loo magacaabay inuu hogaamiyo Wasaaradda Sayniska iyo Tacliinta Sare. Wuxuu bedelayaa Professor Hirut Woldemariam, oo hadda loo magacaabay la-taliyaha arrimaha bulshada Raiisul Wasaaraha. Isaga oo ah la taliyaha raiisul wasaaraha, Professor Hirut wuxuu bedelay Tayiba Hassan, oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee gobolka Oromada ee hoos yimaada Lemma Megerssa ka hor inta aan loo magacaabin lataliyaha.
Sidoo kale, isku shaandhayntii ugu weyneyd ee maanta ayaa dhacday ka bixitaanka Xeer Ilaaliyaha Guud Adanech Abiebie. Adanech ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee qareen noqota lix bilood ka hor bishii Maarso 2020. Ku xigeenkeeda Dr. Gedion Timothiwos hadda waa qareenka cusub halka Tesfaye Dhaba, xubin baarlamaanka ka tirsan isla markaana ahaa gudoomiyaha Guddiga Joogtada ah ee Arimaha Dibada ee HoPR, wuxuu badalay Dr. Gedion inuu noqdo ku xigeenka qareenka guud.
Fikadu Tsega, oo ah Maareeyaha Xafiiska Baarista Dambiyada Xudduudaha ee Xuduudaha, ayaa sidoo kale loo magacaabay ku-xigeenka Xeer Ilaaliyaha Guud iyada oo ay wehliyaan Tesfaye Dhaba.
Adanech looma magacaabin door cusub wareeggan, laakiin waxaa la isla dhexmarayaa inay beddeli doonto ku xigeenka duqa ah ee Addis Abeba. Addis Standard ma xaqiijin karin macluumaadka.
Magacaabista maanta ayaa sidoo kale aragtay bixitaankii Hallelujah Lulie, oo isagu hogaaminayey Machadka Arrimaha Istaraatiijiyadda (ISA) tan iyo bishii Maajo 2019 oo dhowaan is casilay waxaa bedelay Yohannes Buwayalew, oo ahaa madaxii hore ee Xisbiga Dimuqraadiga Amxaarada (ADP) ee Bahir Dar.
Bishii Febraayo ee sannadkan, Yohannes waxaa loo magacaabay inuu hoggaamiyo Akademiyada Meles Zenawi, ​​wuu diiday.
Maanta isku shaandhayn kale oo weyn ayaa ah magacaabista Nigussu Tilahun, Xoghaynta Saxaafadda ee xafiiska Raiisul wasaare Abiy. Waxaa hadda loo magacaabay inuu hoggaamiyo Guddiga Abuurista Shaqooyinka Federaalka. Wuxuu buuxinayaa booska uu banneeyay kadib bixitaankii lama filaanka ahaa ee Efrem T. Lemango (MD), oo iscasilay 06-dii Ogosto.
Endawek Abite, madaxa waaxda arrimaha bulshada ee Maamulka Magaalada Addis Abeba oo leh darajo ku xigeen duqa magaalada, ayaa hada loo magacaabay kuxigeenka Agaasimaha Guud ee Macdanta Birta iyo Injineerinka (MeTEC). Wuxuu horay u soo qabtay agaasimaha guud ee Hay’adda Sonkorta Itoobiya ka hor inta uusan u dhaqaaqin maamulka magaalada. AS
Previous articleDegDeg: Afgambi Millatari oo ka dhacay wadanka Maali.
Next articleSiddeed Shuruudood oo Lagu Xidhay Cidda u istaagaysa Kuraasta ugu sarraysa xisbiga KULMIYE
Ra’iisul wasaare Abey oo shir la yeeshay Saraakiisha Guud ee...
Wasaaradda Kalluumeysiga oo ka war bixisay Kalluun ku soo caariyay Xeebta...